Salesforce CEO ku dhawaaqay qorshe wax soo saarka blockchain - Blockchain News
Salesforce ayaa ka shaqaynaysa alaabta ku salaysan technology blockchain, CEO shirkadda daruur Kombuyuutarada ayaa ayaa shaaca ka qaaday.
Marc Benioff, kuwaas oo la aasaasay shirkadda ee 1999, ayaa sheegay in “Waxaan la fikirka badan oo ku saabsan waxa Salesforce ee istaraatijiyad agagaarka blockchain, iyo waxa xeeladaha Salesforce ee agagaarka cryptocurrencies iyo sida aan la xidhiidhaan waxyaalahan oo dhan,” ayuu yidhi.
Inkasta oo aan la siinayo faahfaahin ku saabsan alaabta soo socda, Benioff ayaa sheegay in uu rajeynayo in ay “waxay leeyihiin xal blockchain iyo cryptocurrency for Salesforce iyo wax kasta oo ka mid ah macaamiisheena a” ka hor inta Dreamforce – shir shirkadda martigelin doonaa San Francisco on Sept. 25.
Salesforce waxaa ugu fiican u yaqaan for ay software daruur Kombuyuutarada maaraynta xidhiidhka macaamiisha. Shirkadda dhigay $10.5 bilyan oo dakhliga sanadkii la soo afjaridda Jan. 31.
Ku biir Guddoomiyaha Salesforce iyo CEO Marc Benioff iyo co-aasaasaha Parker Harris for Fireside Chat a on galabtii Arbacada. Keena su'aalo iyo jawaabo waaqiciga ka aasaasayaasha salesforce.com heli
Post Previous:Mexico waxaa horumarinta nidaamka tartanka blockchain ku salaysan
Carmody ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 28, 2018 at 1:52 PM